Hassan Mudane | Waxa maanku dareemo waa in jirku soo bandhigaa | Page 2
October 27, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faalo	· Leave a comment
Waa koox dhallinyaro mayal adag oo ka dagaalama dalka Musanbiig, waxaa la dhahaa ‘Ansar al-Sunna’ laakiin dadka deegaanka waxay u yaqaanaan Alshabaab. Waxay degan yihiin gobalka “Cabo Delgado,” oo ah gobal ay ku badan yihiin muslimiin, wuxuu hodan ku yahay macdan iyo shidaal. Waxaa la aasaasay sanadkii 2014 laakiin saddex sano ka dib ayay […]
AMISOM KA DIB: MAXAY QAADANAYSAA AMNIGA SOOMAALIYA?
October 18, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Soomaaliya waa in ay ka gudubtaa afar caqabadood si ay u hesho amni sugan. Soomaaliya iyo beesha caalamka waxay qorsheynayaan in mar kale ay hirgeliyaan kalagguur. Markan, ujeedku waa in ciidamada Amisom laga wareejiyo sugidda amniga iyada oo lagu wareejinayo ciidamada qaranka Soomaaliya. Qorshehan kalagguurka wuxuu soo baxay sanadkan 2018. Wejigiisa koowaad, waxaa la qorsheeyay […]
AKHRISKA SIYAASAD DHULEEDKA GEESKA AFRIKA
September 12, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Wixii ka dambeeyay qaraxii 9/11, siyaasad dhuleedka geeska afrika wuxuu noqday mid u furan sheeko hal dhinac ah-argagaxiso. Taa waxaa xigtay mid kale oo iyadana ka saamayn badnayd-burcad badayd. Tobankii sano ee u dambaysay, gobolka waxaa ku loollamay dalal kala dan ah, mid walba wuxuu rabay in uu saamayn dhaqaale iyo mid siyaasi ku yeesho […]
CAQLI COL HORTII JABAY
June 13, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
“Addoonku wuxuu xorriyaddiisu u maraa qulqulad.” -Frantz Fanon Hawraartaa kor ku xusan ee taariikhdu ka weelaysa halgamaagii xaqudirirka ahaa ee Frantz Fanon, waxay hab tusmayn u tahay dhallinyarada Muqdisho ee ku sugan tallan nololeed iyo geeri. Weertaas nuxurkeeda waxaa laga heli karaa murtida dhahaysa “shantu nimayna kaa celin sharci kaama celiyo.” Shiddada siyaasadeed, dilka qorshaysan iyo dulmiga […]
May 12, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment